Root Tadalafil budada (171596-29-5) Isticmaalayaasha & Saar bixiyeyaasha - Warshad
Budada Raw Tadalafil ee ku hoos jirta magaca 'Cialis' waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad la’aanta (daciifnimo) iyo astaamaha qanjirka 'prostate'…
SKU: 171596-29-5 Category: Hormoonka Galmada
SOlubility Isku-buufin DMSO (78 mg / ml at 25 ° C), methanol, biyaha (<1 mg / ml at 25 ° C), dichloromethane, iyo ethanol (<1 mg / ml at 25 ° C)
Storage Temperature Ku kaydi heerkulka qolka u dhexeeya 59 ° F iyo 86 ° F (15 ° C iyo 30 ° C). Ha ku keydin daawooyinkaan meelo qoyan ama qoyan.
Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6] pyrido [3,4-b] indole-1,4-dione Cialis), waa nooc ka mid ah PDE5 inhibitor iyo daawo afka laga maamulo. Waa mid la soosaaray b-carboline waxayna qaab ahaan qaab ahaan uga duwan tahay vardenafil (Levitraw) iyo sildenafil (Viagraw), labaduba waa PDE5 inhibitors ku saleysan qaab dhismeedka aasaasiga ah ee loo yaqaan 'pyrimidine qaab dhismeedka'. Budada Tadalafil (CAS 171596-29-5) waxay kordhisaa qulqulka dhiigga galay corpus cavernosum adoo dejinaya muruqyada xididdada dhiigga, tanina waxay u saamaxeysaa nin inuu gaaro kac kac. Budada Tadalafil waxaa ogolaaday Maraykanka (US) Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) 2003 si loogu daweeyo naaquska (ED), suuqana looga suuq galiyo caalamka oo dhan magaca sumadda Cialis. Waxaa sidoo kale loo istcimaalaa in lagu daweeyo dhiig karka wadnaha iyo dhiig karka iyo qanjirada qanjirka 'prostate hyperplasia', oo ah xaalad qanjirka 'prostate' uu sii weynaado, taasoo keenta dhibaatooyinka kaadida.
Tadalafil ee farshaxanka farshaxanimada kala duwan ayaa ah nolosheeda nuska (saacadaha 17.5) marka la barbar dhigo Viagra iyo Levitra (saacadaha 4-5). Tani waxay sii kordheysaa nolosheeda nusqaayada ficil ahaan, waana, qayb ahaan, masuul ka ah naaneeysiga Cialis ee "kiniiniga usbuuca". Tani waxay sii dheer tahay noloshii badhkeed waxay sidoo kale saldhig u tahay baaritaanka hadda ee loo isticmaalo tadalafil isticmaalka hypertension hypertension sida daaweyn hal mar ah.
Jawaabtaan waxaa dhexdhexaadinaysa sii-deynta nitric oxide (MAYA) oo laga soo daayo xididdada dareemayaasha iyo unugyada endothelial, kuwaas oo kiciya isku-darka unugyada cGMP ee unugyada muruqyada jilicsan ka dibna xakameynaya isbeheysiga iyo kala-goysyada xididdada dhiigga ee geeya dhiigga ugana soo baxa. GMP cyclic GMP wuxuu sababayaa xasillooni muruqsan oo jilicsan iyo socodka dhiigga oo kordha oo ku dhaca corpus cavernosum, waxaana hoos u dhigay cGMP phosphodiesterase nooca 5 (PDE5) ee ku yaal galmada capnosum ee ku taal agagaarka guska. Tadalafil waxay xannibtaa PDE5 oo markaa ku sii xoojiyaa iyadoo la kordhinayo xaddiga cGMP ee la heli karo. Tadalafil waxay ka joojineysaa PDE5 burburinta cGMP ka dibna waxay kordhisaa cGMP la heli karo si loo gaaro shaqeynta waxayna sababtaa kacsiga inuu sii dheeraado.
Si kastaba ha ahaatee, nolosha Tadalafil waa mid gaaban, saameynteeda waxay gashaa xilliga maalmaha 2 ee samaynta PDE5 soo laabashada iyo caafimaadka galmadaaga - ka sii dar. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad qaadato wakhti dheer si aad u xaqiijiso saameynta aad rabto, sida xoogaa xoogan ee Cialis 4-5 maalmaha 4-5.
Cialis waxay ku timaadaa jaale, jilicsan iyo kiniin ah oo kiniin ah oo ku jira 5, 10 iyo 20 milligram (mg). Talaalka bilowga ah ee lagu taliyey ee budada Cialis ee loogu talagalay isticmaalka sida loogu baahan yahay bukaannada intooda badan waa 10 mg, ka hor inta aan la fileynin hawsha galmada.
♦ Maaddada Tadalafil waxay kaa caawin kartaa inaad murqaha ku nasto qanjirkaaga kaadi haysta iyo kaadiheystaada. Tani waxay kaa caawin kartaa hagaajinta calaamadahaaga BPH.
♦ Si loo wanaajiyo calaamadaha ED, budada tadalafil waxay kor u qaadaa kor u qaadista dhiigga guska. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad hesho oo aad sii wadato koritaanka. Si aad u isticmaasho budada tadalafil si ay kuugu caawiso inaad kacsanaato, waxaad u baahan tahay inaad galmo ku kacdo.
♦ For PAH, budada tadalafil waxay u shaqaysaa si ay u hagaajiso kartidaada jimicsi adiga oo ku nasteexo marinnada dhiigga ee sanbabadaada. Tani waxay kordhisaa socodka dhiigga.
▲Dhiigga qaabdhismeedka guska, sida cudurka Peyronie
Budada Tadalafil, budada sildenafil, iyo budada vardenafil oo dhan waxay ku dhaqmaan by la yiraahdo PDE5 enzyme, laakiin daroogooyinka ayaa sidoo kale xakameynaya enzymes PDE 6, 1, iyo 11 heerar kala duwan. Tusaale ahaan, Sildenafil iyo vardenafil waxay joojinayaan PDE6, enzim laga helo isha, wax ka badan tadalafil. Qaar ka mid ah dadka isticmaala sildenafil waxay arkayaan tinge buluug ah waxayna leeyihiin dareen xoog leh oo iftiin leh sababtoo ah PDE6 hortaagan. Ka sokow, Sildenafil iyo vardenafil ayaa sidoo kale xakameynaya PDE1 ka badan tadalafil. PDE1 waxaa laga helaa maskaxda, wadnaha, iyo muruqyada isku xiga. Waxaa loo maleynayaa in xakamaynta PDE1 ay sildenafil iyo vardenafil ay keenaan dheecaan, daadinta, iyo taakulada.
1 Xarunta Macluumaadka Biotechnology, US. Maktabadda Qaranka ee Daawada, Tadalafil, Qaybta Pubchem 1-10.
2.Evelyn C. Cortez, CIALIS (Tadalafil): Isticmaala, Qiyaasta, Waxyeelada Waxyeelada ah iyo Xaggee Gadashada Guud ahaan Cialis (Tadalafil), Viagra (Sildenafil), iyo Mukhaadaraadka Kale ee Fiican Lacag Fiican oo Amaana ah Khatarsan, Safar, 13 Dec 2017, bog 5-3
3.James Lee Anderson, Cialis, Tadalafil: Daawooyinka Erectile Disruption, Calaamadaha Benign Prostatic Hyperplasia, iyo Pulmonary Arterial Hypertension, Abuurista Daabacaadda Madaxbannaan, 26 Mar 2015, bogga 5-47.